डा. केसी पछि किन बस्दैँछन् लामा र तामाङ् अनसन ? - Namaste Post
डा. केसी पछि किन बस्दैँछन् लामा र तामाङ् अनसन ?
नमस्ते पोस्ट २०७४, २८ पुष शुक्रबार ०४:५० 0
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल ९क्रान्तिकारी० की उपाध्यक्ष पञ्चा सिंहले एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता नहुने संकेत पाएको खण्डमा एमाले मुख्यालय र माओवादी मुख्यालमा अनसन बस्ने बताएकी छन् ।
क्रान्तिकारीको कैलाली जिल्ला समितिलाई प्रशिक्षण दिँदै सिंहले रन्जित तामाङ एमाले मुख्यालयमा अनसन बस्नुहुनेछ र नविना लामा पेरिसडाँडामा धर्ना बस्ने बताएकी हुन् ।
उनले भनिन् ‘हामीपनि नेताहरुलाई खबरदारी गर्न अनसन बस्न तयार छौं’ । उनले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको पार्टी एकता कसैले रोक्न नसक्ने बताएकी छिन् ।बाट साभारबेथे साग
बेथे उमालेको पानीले कपाल पखाल्दा जुम्राबाट मुक्ति पाइन्छ । यसो गर्दा कपालसमेत स्वस्थ बनाउँछ । कपालको प्राकृतिक रंग यथावत् रहन्छ ।कान्तिपुर पत्रिकाबाट साभार उपचार गर्ने तरिका रुघाखोकी र घरेलु उपचार
मंसिर १६, २०७४अतुल मिश्रकाठमाडौं — जाडोयाम सुरु हुनासाथ, मौसममा आएको परिवर्तनका कारण रुघा–खोकीको समस्या देखिन थाल्छ । घाँटी खसखस हुनु, नाक बन्द हुनु, नाकबाट पानी बग्नु, रुघाखोकी आदि यो मौसममा देखिने सामान्य समस्या हुन् ।
‘तुलसीको पात सामान्य रुघाखोकीका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार हो,’ डा। ऋषिराम कोइराला भन्छन्, ‘यसले भाइरसलाई समेत निष्क्रिय पार्छ ।’ तुलसीको पात चपाउनाले वा चियाजस्तो पकाएर खानाले रुघा निको हुन्छ ।
रुघा लाग्दाताका दूधमा बेसार मिलाएर सेवन गर्नाले समेत आराम हुन्छ । पानको पातमा थोरै मह र अदुवा राखेर दिनमा दुईतीन पटक खाँदा खोकी राम्रो गर्ने डा। कोइराला बताउँछन् । लसुन उमालेको पानी खानाले वा यसको पोटी खाँदा समेत रुघाखोकीमा राहत मिल्छ । रुघाखोकीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो रोगप्रतिरोधक क्षमतासँग हुन्छ । आयुर्वेदले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ ।
यस्तै, चियापत्ती, बेसार, नुन हालेर उमालेको पानीले कुल्ला गर्दा घाँटीलाई धेरै सन्चो हुने डा। कोइराला बताउँछन् । तुलसी प्राकृतिक एन्टिसेप्टिक हो, जसले घाँटीको संक्रमण हटाउन सघाउँछ ।
विज्ञहरूका अनुसार योगका केही आसनसमेत मौसमी रुघाखोकीको उपचारमा सहायक हुन्छन् । योगले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र शक्तिशाली बनाउनुका साथै मनलाई स्थिर र केन्द्रित गर्न सघाउँछ । योगले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, साथै बाहिरी किटाणुरजीवाणुसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ ।